Manchester United oo gurigeeda ku dubatay kooxda QPR | stn radio	Monday, November 24th, 2014	Home
Manchester United oo gurigeeda ku dubatay kooxda QPR
Nov 24, 2012 - Aragtiyood	Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United ayaa waxay mahdineysaa guul taariikhi ah oo ay galabta ka gaartay Kooxda Kubadda Cagta ee QPR, oo maanta loo soo magacaabay tababare cusub, markii ay iska ceyrisay tababaraheedii hore.
Ciyaarta galabta dhex martay labada koox oo marti loo ahaa kooxda Manchester United, ayaa waxay qeybtii hore ee ku soo idlaatay 0-0, iyadoo Man United ay iska khasaarisay fursado badan oo goolal loo filan karay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta oo ku bilaabatay weerar iyo rogaal celin, ayaa waxay kooxda QPR ay 52-aad fursad u heshay inay goolka hogaanka kaga hormarto kooxda Manchester United, waxaana QPR u saxiixay Mackie, markii uu Lindergaard uu ka dhex dusiyay.
Tababare Harry Redknapp oo goolkaasi la dhacay ayaa wuxuu ciyaarta uu ka daawanaayay tarbuunaha, maadaama Sabtida maanta uun loo soo magacaabay tababaraha kooxda, tan iyo markii ay Jimcihii iska ceyrisay kooxda QPR tababaraheedii hore Mark Hughes.
Manchester United oo ciil iyo caro daran ka muujisay goolkii loogala hormaray, ayaa waxay abuurtay fursado ballaaran, iyadoo daqiiqadii 64-aad ay heshay goolkii barbar dhaca, waxaana u saxiixay xidigeeda Jonny Evans.
Daqiiqadii 68-aad ayaa waxay kooxda Manchester United ay markale heshay goolkeedii labaad, waxaana shabaqa kooxda QPR daba mariyay Darren Fletcher, oo isagu muddo sanad buura ah aan waxba gool ah u dhalin kooxdiisa.
Weeraryahanka kooxda Man United Javier Hernandez oo bedel lagu keenay ayaa wuxuu goolkii seddexaad uu kooxdiisa uu u horseeday daqiiqadii 71-aad, markii uu baas fiican ka helay laacibka khadka dhexe ee Man United Anderson, oo qudhiisa ciyaartu bedel ku yimid qeybtii dambe.
Natiijada ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 3-1 oo ay guushu ku raacday kooxda Manchester United, oo iminka qabatay hogaanka Horyaalka Ingiriiska, laakiin kooxda Manchester City oo Axada berito ah ciyaareysa ayaa waxaa suura gal ah inay dib u soo ceshato hogaankeeda, inkastoo ay kooxda Chelsea la ciyaareyso